people Nepal » गोर्खाली सैनिक – मोदीको छातीमा हतियार तेर्स्याउन नपरोस् ! गोर्खाली सैनिक – मोदीको छातीमा हतियार तेर्स्याउन नपरोस् ! – people Nepal
गोर्खाली सैनिक – मोदीको छातीमा हतियार तेर्स्याउन नपरोस् !
७ असार , दार्जलिङ । पश्चिम बं‌गालको मुमताज मासामा खातून (ममता बेनर्जी) सरकारले नेपाली भाषीमाथि जबरजस्त बंगाली भाषा लाद्न खोजेपछि नेपाली भाषीहरु अान्दोलनमा उत्रेका छन् ।शान्तिपूर्ण अान्दोलनमा बेनर्जी सरकारले दमन गरिरहेको छ । यही क्रममा दुई अान्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।गोर्खाल्याण्डको पक्षमा भारतका अन्य भागमा पनि समर्थनमा नेपाली भाषीहरु अान्दोलनमा उत्रेका छन् । दिल्लीस्थित जन्तर-मन्तरमा प्रदर्शन जारी छ ।